Sina Voankazo sy legioma fanamainana sy famonosana orinasa sy mpanamboatra tsipika | Hanketo
Ny vokatra farany: vovoka voankazo maina, vovoka legioma maina, vovo-voatabia maina, vovo-sakay maina, vovo-tongolo maina, vovo-tongolo maina, manga, mananasy, zezika, akondro
Ny fizotry ny fanodinana ny voankazo maina dia antsoina hoe fanamainana voankazo. Ny fanamainana artifisialy dia mampiasa loharano mafana hafanana, rivotra ary entona flue ho mpanelanelana amin'ny hafanana. Eo ambanin'ny fepetra voafehy, ny mpanelanelana amin'ny hafanana dia esorina tsy tapaka mba hamita ny fizotra fanamainana, raha ny fanamainana voajanahary kosa dia tsy mila manala ireo mpanelanelana famindrana hafanana amin'ny tanana.
Ny fihenan'ny voan'ny voankazo dia voakasiky ny antony efatra: ny toetra voankazo. Ohatra, ny haingam-pahamaina dia miadana raha tery ny volony na matevina ny savoka, ary miadana ny hafainganan'ny siramamy avo. ② Fomba fitsaboana. Ohatra, ny habe, ny endrika ary ny fitsaboana alkali an'ireo voapaika, ny fanapahana araka ny tokony ho izy ary ny fanamasinana ny alika mandoto dia mety hampitombo ny hafainganam-pandeha. ③ Mampiavaka ny mpanamory mpanelanelana. Ohatra, ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha dia haingana rehefa avo ny tahan'ny fivezivezena, avo ny mari-pana ary ambany ny hamandoana; ④ ny toetran'ny fitaovana fanamainana dia samy manana ny vokany, ary ny fahaizan'ny kamio na ny conveyor fehikibo dia mifanohitra amin'ny hafainganam-pandeha maina.
Fitsaboana fanamainana aorian'ny fametahana
Aorian'ny fanamainana, ny vokatra dia voafantina, naoty ary fonosina. Ny voankazo maina mila mando akory (fantatra koa amin'ny hoe hatsembohana) dia azo tehirizina ao anaty kaontenera na trano fitehirizam-bokatra mandritra ny fotoana iray, mba hiparitaka ny hamandoana ao anatin'ny sakana voankazo sy ny hamandoana eo anelanelan'ny sakam-boankazo (voamadinika). zaraina indray mba hahatratrarana tsy fitoviana.
Aleo mitahiry ireo voankazo maina amin'ny maripana ambany (0-5 ℃) sy ny hamandoana ambany (50-60%). Mandritra izany fotoana izany dia tokony hifantohana ny fiarovana amin'ny fahazavana, oxygen ary bibikely.
Previous: Masinina sakafo am-bifotsy sy fitaovana famokarana Jam
Manaraka: Fitaovana yaorta kely